Electromagnetic Lock ကို
Code ကို Lock ကို
Intelligent Lock ကို
စီမံခန့်ခွဲမှုမှ real-time ခြေရာခံခြင်း device ရဲ့စင်းကို
ကျွန်ုပ်တို့၏မော်တော်ယာဉ် tracker Jointech ဆော့ဗ်ဝဲနဲ့အပြည့်အဝပေါင်းစည်းဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျ GSM / GPRS လွှမ်းခြုံအတွက်အမှန်တကယ်အချိန်၌သင်တို့၏မော်တော်ယာဉ်များစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်နှင့်သင့်မော်တော်ယာဉ် Out-of-GSM / GPRS လွှမ်းခြုံသွားရောက်ကာလျှင်တဲ့အခါမှာလာမယ့်အဖုံး, device ကို၎င်း၏ပြည်တွင်းရေး memory နဲ့အပ်လုပ်တင်ထားသည်များမော်တော်ယာဉ်ရဲ့သမိုင်းဆိုင်ရာဒေတာအတွက်မော်တော်ယာဉ်ရဲ့ data တွေကိုသိမ်းဆည်း ...
ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအီလက်ထရောနစ်သော့ခတ်ထဲမှာဂျီပီအက်စ်ရဲ့ module တစ်ခု၏လျှောက်လွှာ
အဆိုပါထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအီလက်ထရောနစ်သော့ခတ် GPS စနစ် positioning ကို, wireless network ကိုဆက်သွယ်ရေးနှင့် RFID နည်းပညာပေါင်းစပ်ထားတဲ့လုံခြုံရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိရိယာတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာအဓိကအားဖြင့်မိုဘိုင်းပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုသို့မဟုတ်ဆောင်းပါးများကိုများ၏စောင့်ကြည့်မှုအတွက်အသုံးပြုသည်။ ထိုသို့သောထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များနှင့်ဆိပ်ကမ်းများ, ကွန်တိန်နာဆိပ်ကမ်းအဖြစ်။ ...
လူအပေါင်းတို့အားလူသိများသည်နှင့်အမျှမူးယစ်ဂိုဒေါင်များသည်အခြားဆိုက်များမှခွဲခြားထားပါသည်။ သူတို့ဓာတုထုတ်ကုန်အဖြစ်သိမ်းဆည်းထားသည်သောကြောင့်, ပတျဝနျးကငျြဆိုငျရာအပူချိန်နှင့်စိုထိုင်းဆများအတွက်လိုအပ်ချက်များကိုအလွန်တင်းကျပ်သောဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးဝေးလံသောစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုစနစ်ကအဓိကကိုယ်ထည်, ဘက်ပေါင်းစုံထောက်လှမ်း device ကိုအဖြစ်ကွန်ပျူတာကိုရည်ညွှန်းသည် ...
အကောက်ခွန်ကွန်တိန်နာကြီးကြပ်မှုများအတွက်လိုအပ်ချက်များကိုဘာတွေလဲ? ဤပြဿနာရဲ့ဆောင်းပါးမှာတော့ Jiutong IOT ရဲ့ Xiaobian လူတိုင်းအတွက်ရန်သင့်အားမိတ်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်: 1. box ကို (ကား) ၏ဖွဲ့စည်းပုံတင်းကျပ်စွာနှင့်ပြည့်စုံသည် ဖြစ်. , box ကို (ကား) ၏ပိတျထားသောအစိတ်အပိုင်းကိုအကောက်ခွန်ဖျံနှင့်အတူလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုလိုလျှင် ...